Vaovao - Gasket Polyethylene Foam mifamatotra White Cross
Ny sela mihidy sela mifandray amin'ny polyethylene foam dia mety ho iray amin'ireo fitaovana gasket foam tsara indrindra. Ny foam polyethylene dia misy sokajy roa lehibe - foam polyethylene mifandray amin'ny hazo fijaliana ary ny fantsom-pifandraisana polyethylene mifandray. Ny farany dia tsara kokoa ary matetika ampiasaina ho toy ny gasket foam ho an'ny tsena ao anatin'izany ny fitaovana ara-pahasalamana, elektronika, fonosana kosmetika, singa fiara, sns.
Ny gasket polyethylene foam mifandray amin'ny irradiation dia manana fahombiazana tsara amin'ny toetra ara-batana.
Toerana fampiononana malefaka miaraka amin'ny famaranana ny tontolo iainana
Fanoherana Premium ny hamandoana, ny toetr'andro ary ny solika
Insulated hafanana sy akustika tsara
Fampisehoana maharitra elongation
Hita amin'ny habe sy loko maro karazana
Rafitra sela mihidy ho an'ny fitrohana rano ambany sy fifindran'ny etona.
Ny fitaovana fampidiran-drivotra plastika mifangaro volo polyethylene dia manana hafainganam-pandeha hafa. Ny halavan'ny hateviny dia misy amin'ny 0,08 mm ka hatramin'ny 8 mm. Ny hatevin'ny hafa dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny lamination. Ny hakitroka koa dia afaka 28 kg / m³ ka hatramin'ny 300 kg / m³. Ny loko mahazatra vita amin'ny foam dia fotsy sy mainty. Ny loko hafa dia azo amboarina ao anatin'izany ny manga, maintso, mena, volomboasary sns.
Raharaha mpanjifa - Fampiharana vokatra vita amin'ny sombin-javatra
Ity misy ireo gasket polyethylene mifangaro mifandray amin'ny hazondamosina novokarinay ho an'ny tsenanay anatiny
mpanjifa. Hampiasain'izy ireo ho toy ny «cushion» ho an'ireo faritra mandeha amin'ny fiara ireo fitaovana gasket PE. Ny gasket polyethylene foam mifamatotra amin'ny hazo fijaliana dia miasa ho toy ny ampahany matanjaka amin'ny fanoherana ny solika sy solika. Noho ny fahaizany maharitra elongation dia miasa tsara izy ireo rehefa miasa ny motera.
Ahoana no fomba fanaovanay ity Gasket foam
Ny fitaovana ho an'ity gasket foam ity dia ny fantsom-panafody mifangaro volo polyethylene miaraka amin'ny tahan'ny fanitarana foam 15 heny sy 65 kg / m³ ny haavony. Ny haben'ny gasket dia 130 mm x 98 mm x 1 mm miaraka amin'ny fanapahana maty maty.
1) sela mihidy polyethylene foam gasket material Voalohany dia mila manamafy amin'ny mpanjifa amin'ny sary CAD vokatra isika. Ny sary CAD vokatra dia tsara kokoa omen'ny injeniera avy amin'ny mpanjifa. Etsy ankilany, raha tsy ampy ny mpanjifa amin'ny fanohanana ny famolavolana CAD, dia azontsika atao izany ampahany amin'ny famolavolana injeniera ho an'ny vokarin'ny mpanjifa.
2) Aorian'ny fanamafisana ny sarin'ny CAD an'ny gasket foam, dia hataonay ny lasitra famonoana vy araka ny sary voamarina. Vantany vao vonona ny bobongolo maty, ny mpiasan'ny orinasanay dia handamina ny famokarana betsaka.
3) Raha ny momba ny tena famoronana an'ity kitapo gasket foam ity dia mila manatanteraka ny fizotry ny famokarana eto ambany isika:
Fitrandrahana sombin-javatra manokana
Ny foam polyethylene tany am-boalohany dia karazan-kitapo vita amin'ny entona vita amin'ny rivotra. Tonga anaty horonan-taratasy izy ireo fa tsy amin'ny ravin-taratasy, ny mpiasa ao amin'ny ozinantsika dia mila mampiasa ny masinina tsofa mitsika hanapaka azy ireo amin'ny takelaka. Ireo takelaka vita amin'ny polyethylene foam notapahina ireo dia tsy maintsy mitovy farafahakeliny amin'ny haben'ny famonoana vy na lehibe kokoa.
Amboary ny famonoana maty ary apetaho ny bobongolo fanodinana maty hanatsarana ny fametrahana mazava tsara
Alohan'ny famokarana tena izy, ny injenieran'ny famokarana ataontsika dia tsy maintsy fotsy gasketety polyethylene fotsy mihidy no mametaka ny bobongolo maty ary mampifanaraka azy tsara amin'ny milina fanapahana maty. Ity fizahana fitsapana ny bobongolo ity dia ho lany fotoana mihoatra ny noeritreretin'ny mpanjifa. Raha ny vokatra azo avy amin'ny fanapahana dia hampiasainay ny ampahany amin'ny akora vita amin'ny foam mba hahazoana antoka fa napetraka tsara ny lasitra vy. Aorian'io dia azo ekena ny famokarana faobe.
4) Ny ampahany farany tokony hataontsika dia ny famonosana entana ho an'ny vokatra vita amin'ny foam vita alohan'ny fandefasana. Hofonosinay ny gasket busa ho an'ny fitaterana tsara kokoa. Ny fonosana manokana toy ny fanontana boaty taratasy sy kitapo poly dia azo avy aminay miankina amin'ny filan'ny mpanjifa.
Ho an'ity tetik'asa gasket polyethylene foam etsy ambany ity dia ilaina